Wasaaradda iyo Guddiyada Dastuurka oo dadweynaha ka qeyb-gelinaya dib-u-eegista dastuurka – Kalfadhi
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay iney bilaabayaan ka-talo-gelinta dib-u-eegista dastuurka dadka gobolada dalka ku nool. War la soo dhigay Feysbuugga guddiga ayaa lagu sheegay in ay maanta arrin ku saabsan aragtidaas kulan uga yeesheen Muqdisho hay’adaha dowliga ah ee ka shaqeeya dib-u-eegista dastuurka.
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka, Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka iyo Wasaaradda Dastuur ayuu sheegay guddigu in ay ku kulmeen Xafiiska Guddiga Dastuurka Baarlamaanka ee ku dhex yaala Xarunta Aqalka Sare. “Kulanka ayaa lagu gorfeynayaa sidii loo bilaabi lahaa la tashiyada dadweynaha ee Dawlad Goboleedyada” ayaa lagu yiri dhigaalka guddiga.
Wasaaradda iyo Guddiyada Dastuurka waxay sanadkaan bilaabeen dardar-gelin xoog leh oo, sida ay sheegaan, ay ku doonayaan in ay ku suurageliyaan in ay ku dhameeyaan dib-u-eegista dastuurka ay ku wadaan isla sanadkaan. Waxay dhawaan magaalada Kismaayo ku qabteen kulan ay Dowlad Goboleedyadu uga aragti dhiibanayeen Dastuurka Qabyada ah.